Golaha Shacabka Oo Kulankoodii Maanta Ku Ansixiyay Xeerka Xuquuqda Siyaasiyiinta Dowladda – Kalfadhi
Kulankii 30-aad ee Golaha Shacabka ayaa ku furmay kooram dhan 170 mudane, waxaana shir guddoominayay guddoomiye Maxamed Mursal oo ay garab fadhiyaan labadiisa ku xigeen. Ajandaha ayaana ahaa akhrinta 3-aad ee wax ka baddalka Mashruuca Xeerka Xuquuqda Siyaasiyiinta Dowladda.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulanka furay waxa uuna u yeeray Guddoomiyha Guddiga Xeer-hoosaadka xildhibaan Maxamuud Macallin Yaxye waxa uuna codsaday in aan loo kala kicin Hindise Sharciyeed-ka Xaqsiinta Siyaasiyiinta Dowladda
“Waxaan codsanaynaa in sharcigaan la meelmariyo maadaama aan kusoo darnay dhammaan talooyin kii aad ku soo darteen.” ayuu yiri xildhibaan Maxamuud Macallin Yaxye oo ah Guddoomiyaha Guddiga Xeer-hoosaadka GolahaShacabka.
Xoghayaha Guddiga Xeer-Hoosaadka Golaha Shacabka ayaa sharraxay wax yaabihii laga baddalay waxa uu dul istaagay qodobo horay looga biya diiday oo ay ka mid ahaayeen magaca xeerkan.
“Waxaan ka dhignay magaca Xeerka Xuquuqda Siyaasiyiinta Dowladda, Waxan kaloo baddalnay in ay isku xuquuq noqdaan Madaxweynaha dhinta inta uu xilka hayay iyo Madaxweynaha dhammaystay muddo xileedka; haddii aan lagu sameen xilka qaadis.” ayuu yiri xildhibaan Faarax Cabdi Xasan xoghayaha Guddiga Xeer-hoosaadka .
intaas kaddib guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa codsaday in cod loo qaado xeerkaan maadaama uu yahay mid muhiim ah.Waxaa u codeeyay 167, waxaana diiday 1 xildhibaan, halka laba xildhibaan ay ka aamuseen.